Bazokhishwa ngenkani abaqube ezindlini zomxhaso eMarikana | News24
Bazokhishwa ngenkani abaqube ezindlini zomxhaso eMarikana
Marikana – ULwesine usuku lomnqamlajuqu kulabo abahlala ngokungemthetho ezindlini zomxhaso, kusho inkantolo yaseMahikeng.
Lokhu kuvele ngemuva kokuba kutholakale ukuthi kunabantu abaqubile kulezi zindlu ezakhiwe ngemali engaphezu kuka-R 700 million, kodwa abantu okuyibona abafanelekile ukuba bazithole abahlali kuzo lezindlu eziseMarikana.
UMasipala waseRustenburg uthathele eNkantolo ukuze athole incwadi yokukhipha laba abahleli kulezi zindlu ngokungemthetho.
OLUNYE UDABA:'Ucansi akulona olokuthola izindlu zomxhaso'
Abahlali banikezwa izincwadi zenkantolo kodwa bazishisa ngoba bethi abayindawo.
Omele laba bahlala u-Aubrey Seitsang uthe: “Njengmuntu omelet umphakathi wakuWadi 32, sizowumela umphakathi wethu enkantolo yaseMahikeng, futhi sizohlala ngenkani lapha ngoba le mizi yakhelwe abahlali bakuWadi 32 nokuyithina labo.